Sony | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Sony Z2 & Z3 ရဲ့ Lollipop version 5.0.2 ကို Root လုပ်နိုင်ရန် အတွက် ကတော့ လွယ်ကူ ပါတယ်။
အရင်ဆုံး လိုအပ်တာ လေးတွေကို အောက်မှာ Download ရယူ လိုက်ပါ။
ပေးထားတာ လေးတွေ Download ရ ယူ ပြီးရင်တော့ စပြီး Root ရအောင် ...
အရင်ဆုံး apk လေး တွေကို install လုပ်လိုက်ပါ။ အားလုံး install လုပ်ပြီး ရင်တော့ King Root apk ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် တရုတ်စာသားလေးနဲ့ Root ဆိုတာလေး ပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒါလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ apk မှာ အလုပ် လုပ်ပေး နေပါမယ်။
100% ပြည့်ရင် finish ပြပါမယ်။ ဘာမှ မနှိပ်ပါနဲ့ ပြန်ထွက် လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Busybox apk ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ box တစ်ခု ပေါ်လာပါမယ်။ allow နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် install ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ Success ပြရင် ပြန်ထွက် လိုက်ပါ။
XZRecovery apk ကို ဖွင့်လိုက်ပါအုံး :) …
ပြီးရင် install recovery ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
box တစ်ခုကျလာပါမယ်။ allow ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
သူ့ဖာသူ အလုပ် လုပ်သွားပြီး ဖုန်းမှာ power shutdown ဆိုတာ ပြပါမယ်။ ခဏစောင့် ပေးလိုက်ပါ။ recovery mode ထဲကို ရောက်သွားပါမယ်။ install ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ down ထားတဲ့ SuperSU.zip လေးကို လိုက်ရှာပြီး install လုပ်ပေး လိုက်ပါ။ အလုပ် လုပ်ပေးနေ ပါလိမ့်မယ်။
done ဆိုပြီးပြရင် reboot system now ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ Root လုပ်ခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။ 😀
မြန်မာစာ ထည့်လို သူများကတော့ ကိုဆိုင်းခိုင်တင့် ရဲ့ Lollipop zawgyi installer.exe လေးနဲ့ မြန်မာစာကို အဆင်ပြေပြေ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, August 10, 20155comments:
SONY LOLLIPOP FIRMWARE များ ကို PREROOTED အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း
SONY ဖုန်းများ အတွက် Firmware အသစ် ထွက်လာတိုင်း Root မရ သေးသော ပြသနာ များ မြန်မာစာ မရ သေးသော ပြသနာ များကြောင့် Version မြှင့်ရန် အတွက်
ကြန့် ကြာနေ တတ်သည်။
ထို အခက်ခဲ များကို ပြေလည် စေရန် မူရင်း Stock Firmware ftf တွင် Super su + Dual Recovery ပေါင်း ထည့်ကာ Ver Upgrade သော နည်းကို ရေးသား လိုက် ပါတယ်။
လိုအပ်တာတွေကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါ။
DUAL RECOVERY FLASH.zip
ORG FIRMWARE FTF
FTF File နေရာတွင် ORG FTF ကို ရွေးပေးပါ။
SuperSu.zip နေရာတွင် Download ထားသော Supersu.zip ကို ရွေးပေးပါ။
Recovery zip နေရာတွင် မိမိ Devices နှင့် ကိုက်ညီသော Download ထားသော Flashable.zip ကို ရွေးပေးပါ။
Extra zip နေရာတွင် မိမိ တို့ အသုံးပြု လိုသာ zip များ ကို ထည့်သွင်း နိုင်ပါသည် ( ကျနော်ကတော့ MM Font+KB.zip ကို အသုံးပြု ပါတယ်)
zip များကို ရွေးချယ် ပြီးနောက် Create button ကို နှိပ် ပါ။
အချိန် အနဲငယ်ကြာ ပြီးနောက် PRF Creator Folder ထဲတွင် Flashable.zip အမည်ဖြင့် Pre Rooted Firmware ကို အသင့် တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို Prerooted Firmware ကို တင်ရာတွင် မိမိ Devices များတွင် အောက်ပါ အခြေနေ ရှိမှ သာလျှင် Upgrade လုပ်နိုင်မည်။
Devices သည် Rooted ဖြစ်ကာ Custom RECOVERY ရှိ ရပါမယ်။ Bootloader Unllock သမားများ အတွက် Fastboot မှ တဆင့် install လုပ်နိုင်ပြီး Bootloader Locked သမားများ အတွက် Root လုပ်ကာ Dual CWM Install.bat ဖြင့် install ပြုလုပ်နိုင် ပါသည်။
ရရှိလာသော Flashable Pre Rooted zip အား Sd Card ထဲသို့ ထည့်ပါ။
ထို့နောက် Phone အား Recovery Mod ၀င်ပီး install လုပ်ပေးပါ။
ထို့နောက် CWM မှ Power Option ကို ၀င်ရောက်ကာ power Off ပေးပါ။
ထို့နောက် Flashtool ကိုဖွင့်ပြီး Org Firmware ကို ရွေးပေးပါ။
Setting တွင် System ကို အမှန်ခြစ် ထားပါ။
ပြီးနောက် FLASH MOD ဖြင့် ချိတ်ဆက်ကာ Flash ပေး လိုက်ပါ။ Flashing ပြီးဆုံး ပါက Devices ကို power on ပေးလိုက်ပါ။
အချိန် အနည်းငယ် ကြာပြီး နောက် Ver upgrade Rooted Rom ဖြင့် လန်းနိုင် ပါပြီ။
နည်းပညာ ဗဟုသုတများ တိုးပွား ကြပါစေ
Posts by ကို မျိုး
ကဏ္ဍ Android, Firmware, Phone Application, Sony
XPERIA T2 ULTRA D5303_19.1.1.A.0.165 V4.4.3 ကို Root ပြီး မြန်မာ Font ထည့်မယ်
XPERIA T2 ULTRA SINGLE D5303_19.1.1.A.0.165 V4.4.3 ကို Root လုပ်ချင် သူတွေ အတွက်ပါ...
ဒီဖုန်း အမျိုးအစားနဲ့ ပါတ်သက် တာကိုတော့ ဒီလင့်မှာ သွားရောက် ကြည့်ရှုပါ...
အားလုံး ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီး ပြီဆိုလျှင် FASTBOOT.ZIP ကို ကွန်ပျူတာရဲ့ တနေရာမှာ ဇစ်ဖြည် လိုက်ပါ...
အဲဒီ FASTBOOT ဖိုလ်ဒါ ထဲကို BOOTD5303.IMG ကို ထည့်ထားပါ...
T2U-lockeddualrecovery2.7.154-BETA.flashable.zip, UPDATE-SuperSU-v2.02.zip နှင့် UPDATE-MYFONT. ZIP ကို ဖုန်းရဲ့ Sdcard ထဲကို ကူးထည့် လိုက်ပါ...
ဖုန်းရဲ့ setting ထဲမှာ usb debugging mode ကို On ပြီးရင် ဖုန်းကို power ပိတ် လိုက်ပါ..
ဖုန်းကို FASTBOOT MODE ၀င်ရန် အတွက် volume up ကိုနှိပ် ပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ပါ..
fastboot folder ကို ဖွင့်ပြီးတော့ အဲထဲမှာ ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်ကနေ shift key ကိုဖိ right click နှိပ်ပြီး open command promp here ကိုရွေးပါ..
command window ပေါ်လာရင် fastboot flash boot bootd5303.img လို့ ရိုက်ပြီး အနိးတား ကီးကိုနှိပ်ပါ... ဖုန်းကို power ပြန်ဖွင့်ပြီး volume down ကို နှိပ်ပြီး
recovery mode ထဲကို ၀င်ပါ..
recovery mode ထဲ ရောက် သွားလျှင် install zip --> choose zip from sdcard ---> မှတစ်ဆင့် T2U-lockeddualrecovery2.7.154-BETA.flashable.zip, UPDATE-SuperSU-v2.02.zip နှင့် UPDATE-MYFONT. ZIP ကို ရွေးပြီး တစ်ခုပြီး တခု install လုပ်ပါ...
D5303_19.1.1.A.0.165_kernel only.ftf ကို flash tool ထဲ ထည့်ပြီး flash လုပ် လိုက်ပါဦး.... ပြီးမှ ဖုန်း
ကို boot လုပ်ပေး လိုက်ပါ... Root ပြီး သွားပါပြီ ...
Credit : http://soemaung.blogspot.com
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Root, Sony, မြန်မာဖေါင့်
Sony Xperia အမြင့် ဖုန်းတော်တော် များများကို Root ပေးနိုင်တဲ့ Easy Root Tool
ကျွန်တော် ဒီ Tool ကို Z1 4.4.4 Root tool အနေနဲ့ Post တင်ဖူး ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီ Tool လေးရဲ့ အသုံးပြုနိုင် စွမ်းက တကယ်ကို ကောင်းမွန် လှပါတယ် Sony Xperia အမြင့် ဖုန်း တော်တော် များများကို Root ရပါတယ် ..
Xperia Z1 C 6903 4.4.4 , Xperia Z Ultra C6833 4.4.2, 4.4.4 , Xperia Z2 C6503 4.4.2 ၃လုံးမှာ စမ်းပြီး ပါပြီ အကုန်လုံး Bootloader Unlock လုပ်စရာ မလို ပါဘူး မြန်လဲ မြန်ဆန် ပါတယ် အသုံးပြု နည်းကို ပြန်လည် ပြောပါ့မယ်
Easy Root Tool ကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါ
Down ရ လာတဲ့ zip ဖိုင်ကို desktop ပေါ်မှာ ဖြည်လိုက်ပါ။
Computer ကို အင်တာနက် ချိတ်ထားပါ။
install ဆိုသော bat file ကို run လိုက်ပါ။
လိုအပ်တဲ့ Towel root apk ကို download ဆွဲ ပါလိမ့်မယ် ခဏ စောင့်ပေးပါ။
ပြီးလျှင် ကွန်ပြုတာနှင့် ဖုန်းကို ချိတ်ပေး လိုက်ပါ။
ဖုန်းမှာ usb debugging တို့ unknow sources တို့ ဖွင့်ထားပါ ဖုန်းနှင့် ကွန်ပြုတာ ကို ကြိုးချိတ် လိုက်ရင် လိုအပ်တဲ့ ဖိုင် များကို အလို အလျောက် သွင်းပေး သွားမှာပါ
Cleaning up ဆိုတဲ့ စာသား ပေါ်လာရင် ကြိုးဖြုတ် လိုက်ပါ ဒါဆို Root ရပါပြီ Super user တော့ ပေါ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး
SuperSu ကို အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် သင့်ဖုန်းမှာ Root Access ရရှိနေ ပါပြီ...
Xperia အမြင့် ဖုန်းတော်တော် များများ အဆင်ပြေ ပါတယ် အချိန် ကုန်လည်း သက်သာပါတယ် Mobile Service သမားတွေ ဆောင်ထား သင့်တဲ့ tool ကောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်...
Credit : myanmarmobileapp.com
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, March 20, 20152comments:
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Root, Sony, Tools
Sony Xperia C3 , D5233 ကို Root လုပ်နည်း + မြန်မာစာ ထည့်သွင်းနည်း
Sony Xperia C3 Model D5233 Root လုပ်နည်းကို ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ် ....
အရင်ဆုံး Xperia C3 ကို ဒီနေရာက တစ်ဆင့် Bootloader Unlock လုပ်ရ ပါမယ်...
Xperia C3 CWM Installer Tool ကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါ။
▼ Xperia C3 CWM Installer Tool ▼
အဲ့ဒီ Tool လေးကိုတော့ (MMAS) မှ ကို Aung Khaing ဖန်တီး ထားတာပါ....
SuperSU.zip ကိုလည်း ဒေါင်းယူပြီး ဖုန်း SD Card ထဲသို့ ကူးထည့် ထားပါ..
▼ Download SuperSU.zip ▼
ပြီးရင် ဖုန်းမှာ USB Debugging ကို On ပေးပါ...
ဖုန်းကို USB ကြိုးမှ တဆင့် ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ...
Xperia C3 CWM Installer Tool ကို Run ပါ...
ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်မှ နံပါတ် (2) ကို ရွေးပြီး Enter ခေါက်ပေး လိုက်ပါ...
ပြီးသွားရင် Xperia C3 CWM Installer Tool မှာပဲ နံပါတ် (3) ကို ရွေးပြီး Enter ခေါက်ပါ..
Recovery Mode မှ Install Zip > SuperSu.zip ကို Flash ပေးပြီး Reboot လုပ်ပေး လိုက်ပါ....
ဖုန်း Reboot ပြန်တက် လာရင်တော့ Root ပေါက်သွား ပါပြီ။
မြန်မာစာ အတွက် MMSD Sony Zawgyi.apk နှင့် အလွယ် တကူ ထည့်သွင်း ပေးနိုင် ပါတယ်။
အသုံးပြုချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါ။
စာရေးဖို့ အတွက် Bagan Keyboard.apk ကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူ ထည့်သွင်း အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်..။
▼ Bagan Keyboard.apk ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, March 04, 20153comments:
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Root, Sony
Pattern Lock ကျနေတဲ့ Sony Xperia ဖုန်းတွေကို ဘာ tools မှ မသုံးဘဲ Factory reset ပြန်ချနည်း
Pattern Lock ကျနေတဲ့ Sony Xperia ဖုန်းတွေကို ဘာ tools မှ မသုံးဘဲ Factory reset ပြန်ချ ကြည့် ရအောင် ဒီနည်းက service သမား တော် တော် များများ သိကြမှာပါ မသိသေး တဲ့ user တွေ အတွက် တင်ပေး လိုက်တာပါ။
အရင်ဆုံး ပုံထဲ ကလို Lock ကျနေတဲ့ မျက်နှာပြင် အောက်က Emerency Call ကို နှိပ်ပေး လိုက်ပါ။
ပြီးရင် *#*#7378423#*#* ကို ရိုက်နှိပ် ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် Customization Settings ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
ပြီရင် Reset customization and reboot ကို ရွေးပေး လိုက်ပါ ဖုန်းက Reboot ကျပြီး ပြန်တက် လာရင် ပုံမှန် အတိုင် ပြန်လည် အသုံး ပြုလို့ ရနေ ပါပြီ။
by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ
ကဏ္ဍ Android, Factory reset, Sony, ဖုန်းနည်းပညာ
Sony Tablet.S များ အတွက် ALL in ONE Automatic Bat
ဒီတစ်ခါ တင်ပေးမှာ ကတော့ Sony Tablet.S များ အတွက် bat file လေး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ bat file လေးကဆို Root ဖောက်ဖို့ တိုင်ပတ် နေကြ သူများ အတွက်ရယ် ဆိုင် သမားတွေ
အတွက်ရယ် ရည်ရွယ် ပါတယ်။ ဒီ Bat လေးနဲ့Sony Tablet.S တော်တော် များများ Root ရ
တာ လွယ်ကူ တာကို တွေ့ ရပါတယ်။
Root ဖောက်မယ်လို့ သာပြောနေတာ ဒီbat file လေးက စွယ်စုံ သုံးလို့ ရတဲ့ bat လေးပါ Root
ဖောက်ရန် တခုထဲ အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ စွယ်စုံ သုံးဖို့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
Rom တင်တာတို့ စသည့် လုပ်ဆောင်ချက် များ အပြင် တခြားသော လုပ်ဆောင်ချက် များစွာ
ဒီ Bat လေးကို အသုံးပြုပြီး Root ဖောက် ချင်တယ် ဆိုရင် bat file ကို run ပြီးတော့ 1 ကိုသာ
နှိပ်လိုက်ပါ Automatic လုပ်ဆောင်ပေး ပါလိမ့်မယ်။ ပါဝါ ကျပြီး ပြန်တက်လာရင် Super su
လေး ရောက်ရှိနေ ပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် တခုရှိ တာတော့ မိမိ PC က မိမိ ဖုန်းကို Driver မသိဘူး ဆိုရင် ဒီ Bat လေးက အလုပ်
လိုအပ်တဲ့ သူများ ကတော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူ သွားနိုင် ပါတယ်။
free Downloads link SonyTablet.S ALL in ONE Automatic Bat
▼ zippyshare.com ▼ OR ▼ solidfiles.com ▼ OR ▼ sendmyway.com ▼
Sony Tablet / Phone တွေ ကွန်ပြူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ရန် အတွက် USB Driver လိုချင်ရင်တော့
အောက်ကလင့်ကို ကလစ်နှိပ်၍ သွားရောက်ကာ မိမိ ဖုန်း / Tablet နှင့် ကိုက်ညီမည့် Driver
▼ sonymobile.com ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, February 22, 2015 No comments:
Sony ဖုန်းများကို လွယ်ကူစွာ Root လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ GIEF Root Tool
ဒီနေ့တော့ ဦးလေးကြီး တင်ပေးမှာ ကတော့ Sony ဖုန်းများ အတွက် လွယ်ကူစွာ Root လုပ်ပေး
နိုင်တဲ့ Bat လေး တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးလေးကြီးလဲ တင်ပေးချင်တာ ကြာပါပြီ လိုင်းမကောင်း တာကြောင့်ရယ် ဆိုင်ခွဲမှာ သွားထိုင်ပေး
နေ ရတာကြောင့် မအားတာ ကြောင့်ရယ်ပါ။
ပြီးတော့ ဆိုင်ကိုလာပြီး လုပ်ခိုင်းထားတဲ့ မိတ်ဆွေများ ဦးလေးကြီး ကျောက်မြောင်း ကဆိုင်မှာ မရှိ
တော့တာကြောင့် ပြီးတော့ ဦးလေးကြီးဆီလာရင်အရင် ဦးဆုံး ဖုန်းဆက်ပေးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
သို့ မဟုတ် ဖုန်းမဆက် ချင်သူများ မိမိတို့ ဖုန်းများကို ကျောက်မြောင်းက ဆိုင်မှာပဲ မိမိ ဖြစ်ပျက်နေ
တဲ့ အကြောင်း အရာကို အသေးစိတ် ပြောပြပြီး ဖုန်းထားခဲ့ ပေးပါ ---
ဒါကတော့ ဦးလေးကြီးဆီ လာရင် ဟို အဝေးကြီးက လာတဲ့ မိတ်ဆွေများကို အားနာလို့ပါ။
ကဲ ခု post ရဲ့ အကြောင်း အရာလေးပဲ ပြောကြားပေးပါတော့မယ်။
ဒီbat လေးကို ဦးလေးကြီး Z3 -Z2 မှာတောင် ဖောက်တာ အေးဆေးပါပဲ Root ပေါက်ပါတယ်။
အရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့GIEF Root Tool ကို အရင် ရယူပါ..
▼ Downloads link GIEF Root Tool ▼
GIEF Root Tool ကို အရင် zip ဖြည်လိုက်ပါ။
GIEF Root Toolဖိုင်ကို ဖွင့်လိုက်ရင် အောက်က ပုံအတိုင်း မြင်ရပါမယ်။
အရင် ဦးဆုံး Phone Setting ထဲက USB debugging check ကို အရင် ဦးဆုံး အမှန်ခြစ် ထားပါ။
installဆိုတဲ့ bat ကို ၀င်လိုက်ပါ။
ပြီးပါက မိမိ Sony အတွက် USB Driver ရှိရပါမယ် မရှိသေးရင် အောက်ကလင့်ကို နှိပ်ပြီး သွား
▼ SONY USB Driver for Connection ▼
ပြီးပါက မိမိဖုန်းကို computer နဲ့ ချိတ်ဆက်ပါ။
အကုန် အပြီး လုပ်ဆောင်ပြီးမှ install ဆိုတဲ့ bat ကို ဖွင့်ပါ။
bat တက်လာတာနဲ့ key တခု ခုကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
allow USB Debugging ဆိုတဲ့ စာတန်း တက်လာပါက အကွက်ထဲမှာ အရင် အမှန်ခြစ်ပေးပြီး
ok ကိုသာ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
auto လုပ်ဆောင်ပြီး ပါဝါ ကျသွား ပါလိမ့်မယ်။
ပါဝါပြန်တက်လာတာနဲ့ မိမိ ဖုန်းမှာ Supersu app လေးရောက်ရှိနေရင် သင် Root ဖောက်တာ